Topnews:- Kooxda Dam Jadiid oo la wareegtay awooda Dowladda Somalia- Cadeeyn
05 June 2013 Waagacusub.com-Awooda Dowladda Federalka Somalia ayaa gashay gacanta kaadiriinta Urur diimeedka Damu Jadiid ee ka tirsan Xukumadda Ra''isulwasare Saacid .
Wasiirada ka tirsan Xukumadda Federalka Somalia ee kaadiriinta Damu Jadiid waxay leeyihiin awoodo ka baaxad weyn tan Madaxweynaha iyo Raísulwasaraha Somalia. Wasiiru Dowlaha Madaxtooyadda Somalia Farah Abdulkadir oo sharciyan shaqadiisa tahay agaasinka hoowlaha Madaxtooyadda kana mida kaadiriinta Dam Jadiid ayaa noqday ninka awooda Dowladda Somalia gacanta ku haya.
Wasiirka Arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka Somalia Abdikarim Guled oo isna ka mida Kooxda Dam Jadiid ayaa noqday ninka labaad ee ugu awooda badan Madaxda Dowladda Somalia.
Wasiiradda Arrimaha gudaha iyo Madaxtooyadda Somalia waxay degan yihiin guryo amaankooda si weyn loo adkeeyay ,laguna xiray Kaamirooyinka wax duuba ee gudaha laga daawado,iyadoo lagu wareejiyay derbiyada guryahooda silig koronteeysan iyo jawaano dhagxaan iyo caro ka buuxdo.halka Wasiiradda kale ee Xukumadda aysan awoodin inay sameeystaan laba ama sedex askari oo amaankooda ilaaliya iyo gaari ay ku socdaan.
Wasiiradda Xukumadda Federalka Somalia ee aan ka tirsaneen Dam Jadiid ayaa qaarkood waxay iskula degan yihiin labo ,labo ama sedex Wasiir.
Sheekada ugu yaabka badan waxay tahay in dhamaan Wasiiradda Xukumadda Somalia ee aan ka tirsaneeyn lagu lamaaniyay Wasiir ku xigeen ama Wasiiru Dowle la socda xaaladiisa kana tirsan Urur diimeedka Dam Jadiid.
Wasiiru dowlayaasha iyo Wasiiro ku xigeenka lagu lamaaniyay Wasiiradda Xukumadda Somalia waxay ka awood badan yihiin Wasiirada,iyadoo mararka qaarna fuliyo hoowlo aysan kala tashan Wasiiradda.
Ra''isulwasaare ku xigeenka Xukumadda ahna Wasiirka Khaarijiga Fawsiya Yusuf ayaa madaxa qabsatay markii Wasiiru Dowlaha arrimaha dibadda Somalia Mohamed Nur Gacal oo ka mida Kaadiriinta Dam Jadiid magacaabay qunsulka Safaaradda Somalia ee Saudi Arabia.
Gacal oo safar ku tegay Cumaan wuxuu qorsheeynayaa inuu dalalka Carabta u magacaabo Safiiro iyo qunsulo,sida ay baahisay Idaacada Shabelle oo xog ka heshay ila wareedyo ay ka gaabsatay inay magacooda xusto.
Sida muuqata Dowladda Federalka Somalia waxaa ka hoos dhisan Dowlad ka awood badan oo ay maamulaan Dam Jadiid.
Madaxweynaha Somalia lama oga sababta ku qasabtay in Masiirkii loo igmaday ee umadda Soomaaliyeed u gacan geliyo Dam Jadiid.
Dam Jadiid waxay dhaqaale xoogan ka helaan dalalka Carabta ,iyagoo adeegsanaya magaca Dowladda Somalia laakiin dhaqaalahaas lama arag ,lamana ogga meesha ay geeyaan.